Obama vs. McCain: Karama vs. Fikarohana Organika » Martech Zone
Obama vs. McCain: Karama vs. Fikarohana Organika
Zoma, Oktobra 31, 2008 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
Raha misy zavatra iray nanova ny tontolon'ny fifidianana tamin'ny 2008, dia ny fampiasana Internet. Niresaka tamin'ny mpitarika ny Repoblika iray eto Indiana aho herinandro vitsivitsy lasa izay ary nanaiky tanteraka izy fa mila manatratra fotoana fohy ny antoko.
SpyFu Keyword SmartSearch dia serivisy mahafinaritra ho an'ny fikarohana statistikan'ny motera fikarohana, sady karama no voajanahary. Nanomboka izy ireo tamin'ity herinandro ity SpyFu Kombat. Ny interface dia mamela anao hampitaha tranonkala roa mifaninana ary hamerina hijery ny toerana misy ny teny lakile mifanindry ary koa ny mampiavaka azy.
Avy amin'ny ekipa ao amin'ny SpyFu:
Raha asehon'ny SpyFu ny fomba filalaovan'ny teny lakile ny fampielezan-kevitry ny mpifaninana iray, dia asehon'ny SpyFu Kombat ny fomba hamaritan'ireo mpifaninana ireo ny paikadinao manaraka. Amin'ny alàlan'ny fampidirana ireo tranokala ao amin'ny SpyFu Kombat, ny valiny dia mampiseho ny lisitry ny teny lakile isaky ny faritra voazara ho teny sy teny manokana iraisan'ny mpifaninana. Ireo mpifaninana aminao? ny lisitra mahazatra dia lasa voankazo mihantona ambany amin'ny fananganana paikadinao manokana.
Hitanay fa ny matihanina SEM / SEO dia voadona tamin'ny mpifaninana mpifaninana? lisitry ny teny lakile, na zavatra fotsiny no tadiavin'izy ireo hanafoanana ireo toerana malemy. SpyFu Kombat dia manambatra ireo fihetsika ireo ho iray. Inona no azonao? Dia sary an-tsary mifandray, voafaritry ny fomban'ireo sehatra nofantenanao mifanohitra.
Teknolojia mahatalanjona izy io ary milaza ny tantarany aho Ny fanarahana Internet tsy mampino an'i Barack Obama - ary koa ny fomba fanoheran'i John McCain.
Volume fikarohana ara-organika: Obama Beating McCain:
Volan'ny fikarohana karama: Niady i McCain:
Misy tantara iray eto izay tsy notantarain'ny media mahazatra, tena mila izany! Izany mety hisy fiantraikany amin'ny fifidianana ny teknolojia mahafinaritra be!
Tags: barack obamajohn mccainObamaobama mifanohitra mccainkarama mifanohitra amin'ny organikafampielezan-kevitra politikafikarohana ara-organika politikafikarohana ara-politika
Zon'olombelona sy fahatokisana amin'ny bilaogy
31 Okt 2008 amin'ny 9:35 PM
Nolazaiko tamin'ny namana sasany androany fa nieritreritra aho fa ny fampiasana ny Internet amin'ny Internet dia antony iray lehibe amin'ny fahombiazany, nametraka tranokala fampahalalana (voteforchange dot com sy taxcutfact dot org) tao amin'ny twitter sy media sosialy hafa, nahita fomba hamihina izy taranaka iray manontolo ary mifampiresaka amin'izy ireo amin'ny fomba tiany.
Ny ho avin'ny fampielezan-kevitra dia napetraky ny tobin'i Obama-Biden, ho hitantsika bebe kokoa izany amin'ny taona ho avy.
3 Nov 2008 amin'ny 7:12 maraina
Raha ny marina dia ekeko ianao any adama, misy fiatraikany lehibe azo antoka fa fantany izay ataony!
3 Nov 2008 tamin'ny 1:48 PM
Ny tena manosika ny saiko momba ny spyfu dia ny habetsaky ny fampahalalana omeny. Aiza no ahazoany ny isany ?! Tsy heveriko fa misy ny tatitra feno toy izany noho ny lalàna mifehy ny tsiambaratelo.
5 Nov 2008 amin'ny 11:58 maraina
ankehitriny nandresy i Obama izay heverinao fa karama na organika kokoa 😉
5 Nov 2008 tamin'ny 12:29 PM
Misy ny tombony sy ny fatiantoka amin'ny paikadin'ny fikarohana PPC sy Organic, saingy nieritreritra foana aho fa ny fananganana fototry ny fahatokisana sy fanarahana tsara dia asan'ny bilaogy sy fikarohana organik.
Vonoiko ny voka-pifidianana adaladala rehetra, mety ho fomba iray maminavina ireo mpanao politika ho avy eto amintsika izany!
Mar 16, 2010 amin'ny 6: 14 AM
ary ahoana ny semrush? efa nanandrana an'io serivisy io ve ianao?